Sɛ Obi Tu Nyinsɛn Gu a, Wayɛ Bɔne Anaa? | Bible Nsɛmmisa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikongo Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Nkwa som bo ma Onyankopɔn. Sɛ ɔbaa nyinsɛn a, bere a abofra no yɛ mogyatɔw mpo, Onyankopɔn bu no sɛ onipa a nkwa wɔ ne mu. Honhom kaa Ɔhene Dawid ma ɔkaa Onyankopɔn ho asɛm sɛ: “ Bere a meyɛ mogyatɔw mpo no, w’aniwa huu me. ” (Dwom 139:16) Onyankopɔn hyɛɛ mmara sɛ obiara a ɔbɛpira abofra a ɔhyɛ ne maame yafunu mu no, wɔbɛtwe n’aso. Enti, Onyankopɔn fam no, sɛ obi tu nyinsɛn gu a, na wadi awu.—Exodus 20:13; 21:22, 23.
Sɛ bere sõ sɛ ɔpemfo bi wo a, ɛbɛtumi aba sɛ n’awo mu bɛyɛ den paa. Ebi mpo a ɛho bɛhia sɛ okunu ne ɔyere no si gyinae yi: Wɔnnye abofra a wɔnwoo no no nkwa na maame no nwu, anaasɛ wɔnnye maame no nkwa na abofra no nwu? Ɛba saa a, awarefo no na ɛsɛ sɛ wɔpaw nea wɔpɛ sɛ wɔgye no nkwa.
Sɛn na Onyankopɔn bu nyinsɛn a wotu gu, mogya a wɔde ma, ne mmoa nkwa?